Nanolotra ny fandraràna ny fihazana sy ny varotra i Botsoana satria mihena ny isan'ny elefanta
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanolotra ny fandraràna ny fihazana sy ny varotra i Botsoana satria mihena ny isan'ny elefanta
Ny valin'ny fanadihadiana elefanta farany sy be indrindra an'ny mponina ao Botsoana dia tombanana ho an'ny elefanta 126,000 ny isan'ny firenena, ny fihenana iray hafa avy amin'ny 131,600 notaterina tamin'ny taona 2014. Ny tatitra dia mampiseho porofo miverimberina momba ny fiakarana lehibe amin'ny fividianana elefanta amin'ny toerana mafana efatra ao Botswana Avaratra, izay nanomboka tafio-drivotra tamin'ny herintaona.
Ity tatitra nataon'ny Elephants without Border (EWB) ity dia taorian'ny nanoloran'ny komity zana-komity kabinetra ny tatitra momba ny fihazana azy ireo tamin'ny filoha Masisi ny alakamisy lasa teo, izay manolotra tsy ny fanafoanana ny fandraràna mihaza ihany, fa koa ny fampidirana hena elefanta mahazatra sy hena elefanta mifandray indostrian'ny fihinanam-borona ho an'ny sakafon'ny biby fiompy, ary koa ny fanakatonana ny làlan'ny mpifindra monina sasany.
Ny governemanta Botswana dia nanolotra tolo-kevitra tany amin'ny CITES ho fanomanana ny fivorian'ny CoP18 tamin'ny Mey tamin'ity taona ity, nangataka ny fanitsiana ny lisitr'i CITES ny elefanta savannah afrikanina hahafahana mivarotra amboara fihazana, biby velona ary tahiry manta (an'ny governemanta) voasoratra ivoara.
Araka ny tatitry ny status elefanta afrikanina (2016), Ny elefanta any Botsoana nihena 15% tao anatin'ny 10 taona lasa. Asehon'ity tatitra ity mazava tsara fa tsy mitombo ny isan'ny elefanta any Botsoana, araka ny sosokevitra matetika ao amin'ny lalantsara politika sy fihazana. Na dia ny mponina ao aminy aza no mbola be indrindra ao atsimon'i Afrika, dia 100, 000 izany ambany noho ny 237,000 matetika notononin'ny mpanao politika ary ny haino aman-jery any Botswana. Amin'ny fanandramana hanamarinana ny famonoana sy ny fihazana.
Ny mponina elefanta EWB 126,000 dia mifototra amin'ny fanadihadiana an'habakabaka manerana ny faritra, manarona faritra lehibe kokoa noho ny fikarohana nataon'ny EWB teo aloha. Ny ekipa mpiray EWB sy DWNP dia nanidina nandritra ny 62 andro, nandrakitra fifindrana mihoatra ny 32,000 km ary nandrakotra maherin'ny 100,000 km2 avy any Botsoana, ao anatin'izany ny Chobe, Makgadikgadi ary ny Valan-javaboary Nxai Pan ary ireo faritra manodidina ny fitantanana ny fiainana dia, ny Okavango Delta ary ny Moremi Game Reserve, ary ireo faritra fiandrasana any Ngamiland, Chobe ary ireo Distrika afovoany.
Toerana mafana fitrandrahana elefanta efatra nambara tany Botswana Avaratra
Hatramin'ny fanadihadiana farany natao tamin'ny taona 2014, ny ekipan'ny mpikaroka EWB dia nahita fitomboana tampoka amin'ny fatin'ny elefanta vaovao sy vao tsy ela akory izay, izany hoe elefanta maty nandritra ny taona lasa noho ny antony voajanahary sy ny fanendahana.
Ny ekipa EWB dia nanamafy fa ny fatin'ireo elefanta 128 latsaky ny herintaona dia 72 no voamarina na tany an-tany na tamin'ny fanombanana an'habakabaka novonoin'ny mpihaza ary 22 fanampiny nalaina tamin'ny sary fanadihadiana ho an'ireo niharam-boina. Ho fanampin'izany, fatin'olona 79 tranainy mihoatra ny herintaona no notombanana tamina toerana mafana iray, ka 63 tamin'ireo no voamarina ho voaroba. Ny tahan'ny fatin'ny sokajin-taona rehetra dia nitombo hatramin'ny 6.8% ka hatramin'ny 8.1% teo anelanelan'ny 2014 sy 2018, neken'ny rehetra ho toy ny manondro isan'ny elefanta izay mety hihena.
Ny elefanta dia mbola mampiseho ny porofo mivaingana momba ny fihazana olona miaraka amina modus operandi mitovy amin'izany. Notifirin'ny mpihaza an-keriny tamin'ny basy calibre mahery ireo biby rehefa tonga hisotro amin'ny lapoaly mandavantaona. Raha tsy maty eo noho eo ny elefanta dia manetsika azy ny iray amin'ireo mpihaza amin'ny alàlan'ny fanimbana ny tadin'ny hazondamosina amin'ny famaky. Voaroaka ny vilanin'izy ireo, manimba be ny karan-doha, matetika esorina amin'ny vatan'izy ireo ny vatan-kazo, ary rakotra rantsana notapahina ny fatin'izy ireo mba hanafenana ilay biby maty.
Ireo mpihaza dia toa miasa amin'ny faritra iray, mikendry ireo omby misy volo lehibe, alohan'ny hifindrany amin'ny toerana manaraka. Tsy dia maika izy ireo, satria ny tobin'ny mpihaza koa dia hita teny akaikin'ny iray amin'ireo sampahom-paty.
Ny ekipa mpanamarina ny tany dia nametraka fa ny ankamaroan'ny elefanta voaroba dia omby eo anelanelan'ny 35-45 taona. Izy io koa dia mifanitsy amin'ny porofo ao amin'ny tatitra fa ny isan'ny omby dia nihena raha 21,600 ny olona tamin'ny 2014 lasa 19,400 tamin'ny 2018.
Hita amin'ny toerana mafana efatra any amin'ny faritra avaratr'i Botsoana ny fanararaotana - ny faritra eo anelanelan'ny Pan Handle sy Caprivi Strip, ao amin'ny faritra Savuti ao Chobe, misy an'i Khwai sy Linyanti, akaikin'i Maun, ary eo amin'ny faritra anelanelan'ny Chobe sy Nxai Pan.
Vondronà siantifika elefanta mahaleo tena sivy no nandinika ny tatitry ny EWB ary nahita fa mafy orina ny siansa. Ny mpikambana iray dia nanambara hoe: "ity dia tatitra feno sy voarakitra an-tsoratra tsara mampiseho hadalana izaitsizy tokoa".
Na eo aza izany, ny governemanta Botswana dia mbola manandrana mametraka fisalasalana amin'ny olana maro samihafa amin'ny antsipiriany ao anaty tatitra, ao anatin'ny fampielezana politika mikorontana. EWB mandà mafy ny fitakian'ny governemanta ary nilaza izy ireo fa mampalahelo fa tsy nifandray tamin'izy ireo mivantana ny governemanta mba hiady hevitra momba ilay tatitra.
Ho fanampin'ny fatin'ny elefanta maro dia rhino 13 no novonoin'ny mpihaza tao 11 volana monja tao Botswana, ny telo dia tao amin'ny Delta Okavango. Mampivarahontsana ny firongatry ny fihazana biby dia, indrisy fa tsy an'i Botswana irery.
Dr Iain Douglas-Hamilton, mpikambana ao amin'ny tontolon'ny famerenana dia nilaza fa "raha ny fahitako azy [ny EWB] dia nanisa fa ny fihazana elefanta dia nitombo ho amin'ny ambaratonga lehibe kokoa noho ny noheverina teo aloha, dia mampiakatra ny mety hisian'ny fiakarana bebe kokoa".
Nanampy ny mpikambana iray hafa, "azo antoka ny milaza fa, raha mitohy ny firongan'ny fangalarana hazandrano, dia mety hisy fihenana be ny isan'ny elefanta. Tsy tia mahita dokambarotra ratsy mihitsy ny mpanao politika, na izany aza, tokony ho fiantsoana fampitandremana izany, ary tokony hisy ny hetsika fisorohana ”.